Video Laryngoscope, Kit Anesthesia azo ampiasaina, Laryngoscope azo ampiasaina - Biotek
Ny sivana amin'ny rafitra miaina
Circuit miaina azo alefa
Kit Catheter Valo afovoany azo ampiasaina
SPO2 sensor sy fanadihadiana ny mari-pana
Anesthesia eo an-toerana
fitaizana ny be antitra
Manana patanty teknika marobe izahay, amin'ny ankapobeny mifantoka amin'ny vokatra fanatoranana amin'ny fandidiana klinika.
Ny orinasanay dia nomena mari-pankasitrahana rafitra fitantanana kalitao ISO 13485 sy fanamarinana CE ary fanamarinana USA FDA.
Ny orinasan-tsika vaovao dia miorina ao amin'ny National Medical and Pharmacy Innovation Park, Zone fampandrosoana teknolojia avo lenta any Nanchang, manarona 33,000 metatra toradroa.
Ny firaisana sy ny firaisana
Mpisava lalana sy manavao
Ho tonga mpamatsy laza malaza vokatra anesthesia.
Nanchang Biotek Medical Technology Co., Ltd. Code Stock Code: 831448） dia orinasa manana teknolojia avo lenta, manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana, R&D ary marketing amin'ny vokatra fanatoranana. Ny orinasan-tsika vaovao dia miorina ao amin'ny National Medical and Pharmacy Innovation Park, Zone fampandrosoana teknolojia avo lenta any Nanchang, manarona 33,000 metatra toradroa. Biotek dia manana ekipa fitantanana kalitao, R&D ary teknika avo lenta. Izahay dia manana haitao mandroso sy efitrano madio, miaraka amin'ny traikefa fanamboarana matanjaka. Ny orinasanay dia omena mari-pankasitrahana rafitra fitantanana kalitao ISO 13485 sy fanamarinana CE ary fanamarinana USA FDA. Manana patanty teknika marobe izahay, amin'ny ankapobeny mifantoka amin'ny vokatra fanatoranana amin'ny fandidiana klinika.
Laryngoscope horonan-tsary azo ampiasaina amin'ny fampidirana
Saron-tava laryngeal avo roa heny azo ampiasaina a ...
Tube Tube Endotracheal Double Lumen
Tube Tube Tube Endotracheal Medical miaraka amin'ny suctio ...
Famerenana ny maripana azo atsipy ary SPO azo ampiasaina ...
Mpamatsy ambony China China Nasal Airway / Nasophary ...
Saron-tava Anesthesia Vehivavy Wholesale Wholesale vehivavy amidy
Hot sale Hme sivana fanatoranana ary miaina ...
Circuit miaina afaka mivelatra avo roa heny ...
Medical grade fitaovana 100ml 150ml 200ml Pca An ...
Telefaona: + 86-791-88113909
Orinasa biostèti biostek mankalaza ny ...
Ny orinasa anesthesia BIOTEK anesthesia anay dia hanana fialantsasatra 5 andro manomboka amin'ny 1 Mey ka hatramin'ny 5 Mey 2021, hankalazana ny fialantsasatra ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa.
Momba ny fanatoranana eo an-toerana
Fampidirana Anesthesia eo an-toerana (fanatoranana eo an-toerana) dia fomba fanakanana vonjimaika ny fitaretan-kozatra amin'ny faritra iray amin'ny vatana hamokarana fanatoranana, antsoina hoe fanatoranana eo an-toerana. Raha ampitahaina amin'ny anesth ankapobeny ...
Araka ny sakany sy ny natioran'ny vokatry ny fanatoranana, ny fomba fanatoranana ankehitriny dia sokajiana ho toy izao manaraka izao. (1) analgesia akupunktur sy anesthesia fanampiana dia fomba fanatoranana manokana de ...
Famaritana ny fanatoranana
Ny famaritana ny milina fanatoranana dia ny fanaovana ny vatan'ny marary na ny ampahany aminy hahavery ny fahatsapana fanaintainana. Ny famaritana feno dia ny hahatonga ny vatan'ny marary na ny ampahany tsy hahatsiaro tena vetivety ...